Toamasina Krismasy tao anaty oram-be
Fitoriana an-dRajoelina Hapetraka amin’ity herinandro ity
Be dia be ireo porofo hoentinay eny anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana amin’ny alakamisy izao hahafahanay mitory ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Nirina Rajoelina, hoy ry zareo mpitarika ilay Hetsi-bahoaka ho an’ny Fanovana sy ny fanorenana Ifotony, tontosaina etsy Analakely.
Sendikan’ny mpiasan’ny Kraoma Mangataka fihaonana maika amin’ny praiminisitra
Nanao fanambarana tetsy amin’ny SEndika KRIstianina Malagasy Behoririka ny sendika solontenan’ny mpiasa avy ao amin’ny orinasa Kraoma omaly alatsinainy 13 aogositra.
Faminaniana samihafa Sao dia famitaham-bahoaka sy fanasana atidoha ?
Nisy resaka faminaniana sy fahitana foana teo amin’ny tantaram-pirenen’i Madagasikara. Saika nisy foana ny hoe fisehoan’i jesoa kristy, fisehoan’i Masina Maria…
Fikambanan’ny sendika sy ny mpiasam-panjakana Malagasy Fitsapan-kevi-bahoaka aloha no tokony hatao
Paositra Malagasy Hifampizara traikefa amin’ny firenena maro
Nampahafantarina omaly alarobia 8 aogositra tetsy amin’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra (MPTDN) tetsy Antaninarenina ny fisian’ny ilay vokatra vaovao fandefasam-bola sy fandraisam-bola avy any ivelany.
Fivoriana ara-potoanan’ny CUA Maro ireo zavatra voadinika ho amin’ny fampandrosoana
Nifarana omaly 8 aogositra ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny Filankevitry ny tanànan’Antananarivo, izay natao nandritra ny 10 andro, notarihan’ny filohan’ny mpanolotsaina monisipaly kolonely Faustin Andriambahoaka.
Efa nampiomana ny sampana mpamantatra ny toetr’andro fa hirotsaka ny orana iny faran’ny herinandron’ny Noely iny, ary dia tonga tokoa ny mahalena.
Tsy teto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin’ny faritra ihany koa. Tao Toamasina izao dia tsy nisy nanam-po ny rehetra fa tao anatin’ny oram-be izay niteraka rano nameno arabe sy ireo faritra iva, no namonjena fodiana ho an’ireo nivoaka nitondra ny ankohonany noho ny fetin’ny krismasy sy ny vavaka misasak’alina. Samy nanana ny nankalazany ny krismasy mantsy ny rehetra, tao ireo namonjy fiangonana izay tsy tahaka ny isan-taona ny fahatongavan’ireo mpino, teo koa ireo nitondra an-janany naka sary niaraka tamin’ny Dadabe noely teo amin’ny araben’ny fahalevantena manoloana ny Lapan’ny tanàna ary ireo mpianakavy sy andiana tanora namonjy ireo trano fandihizana sy fanaovana “karaoke” samy hafa teto Toamasina. Na izany aza, nilamina tamin’ny ankapobeny, feno mpitandro ny filaminana ny tanàna, tao ireo nandeha fiara, tao ireo nandeha an-tongotra ary teo ireo mandeha moto. Mbola nahitana mpivarotra maromaro hatrany hita nameno ireo tsena, indrindra mpivarotra akoho amam-borona.